5 Izindawo Iningi Engaqondakali EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Izindawo Iningi Engaqondakali EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 01/01/2020)
Ezwekazini laseYurophu ingenye ngokugcwele umlando ocebile, izindaba emangalisayo, ezamehlela, kanti kwesinye isikhathi kuba imfihlakalo. Kuwo wonke amazwekazi has awayo izindawo mystifying. Nokho, kubonakala sengathi IYurophu inenye futhi ezinye zezindawo eziningi ezimangalisayo futhi engaqondakali emhlabeni. Mystery njalo has isikhalo abahambi entsha. Ngakho-ke, ke akumangalisi ukuthi kungani abahambi ngaphezulu sibambe iyenze ibe umgomo wayo ukuvakashela kulezi zindawo. Londoloza Isitimela uye waqoqa uhlu yezindawo ezinhlanu eyinkimbinkimbi kunazo zonke eYurophu ukuthi uqiniseka mangaza futhi agcizelele ngisho ayoliswe iningi abahambi.
1. Izindawo Iningi Engaqondakali In The Netherlands – Giethoorn
Indawo yokuqala sikwazi ukuncoma kuyinto engaqondakali ngomqondo wokuthi kuyinto ehluke esiyingqayizivele. Itholakala eNetherlands futhi cishe yezindawo eziningi ezimnandi ungavakashela. Giethoorn kuyinto emzaneni ukudlula noma iyiphi enye. Abaningi bakubheka njengodumo njengoba yokubaleka ephelele evela empilweni yesimanje. It has no imigwaqo futhi kungekho lutho abantu abahlala kuwo. Empeleni, kuba uhlobo cut off kusukela lonke Netherlands.
Ukuchitha isikhathi Giethoorn kuzokwenza uzizwe sengathi awusenalo ezweni lanamuhla futhi bangene ezinkathazweni yayo ngokuphelele. Njengoba isikhathi sihamba siyobona sishesha, futhi uyozizwa ngokuphelele awanaki. Ngokwazi ukubukeka nokuzwakala ekuhambeni emzaneni, into yokuqala uzophawula indlela encane kuba. Uyothola uqaphela ukuthi kunezindlela ezimbalwa kakhulu ukuthatha. Empeleni, kuyoba emiseleni indlela kakhudlwana futhi isikebhe ugibele etholakalayo kuka imigwaqo ukuze lweminyaka. Izindlu edolobhaneni uzokunika Vibe zwe elidala.
Uma kwenzeka uzithola e-Austria, kumelwe ukuhlela Ukuvakashela esinye sezimangaliso enkulu engokwemvelo ezikhona. Eisriesenwelt ingenye ice emihumeni ngobukhulu ezikhona emhlabeni. Empeleni, uma kuhunyushwa English, kusho ukuthi World of Giants. Ukuhlehlela kuleli emhumeni kumnandi kuzokwenza uzizwe sengathi wena iqoqo i-movie ezisemkhathini. Kunezinto eziningana ukuthi ezimangalisayo mayelana Eisriesenwelt.
Okokuqala, ubukhulu bomsebenzi emhumeni ice ngokwayo ngeke ngikushiye ukwesabe. Uma uhamba kulo kungathatha wena cishe ihora nesigamu kuya ephelele. Okwesibili, ingaphakathi emhumeni ngeke ngikushiye kubanda futhi bahlabeka umxhwele. Ezinye zezinto eziningi ice izibalo, ice ukubaza, futhi izindonga ice abasakwazi umxhwele futhi ushiye abaningi elahlekile amazwi. Ezinye zalezi zokwakheka omkhulu ice kukhona kunabo 20 amamitha! Ebumnyameni womhume, iqhwa zikhanyiswa magnesium izibani intando “liphile.” Njengoba ukukhanya egcina ukukhanya nangemidanso ngemuva, umqondo imfihlakalo zemvelo zizoba akushaye. Ekuphetheni, ubani eduze Werfen, Austria kudingeka uzinike isikhathi uvakashele Eisriesenwelt.
Salzburg ukuthatha Izitimela
Munich baphonse Izitimela
Innsbruck baphonse Izitimela
Vienna ukuze Werfen Izitimela
3. Izindawo Iningi Engaqondakali Ukuze Vakashela E-Italy – Capuchin catacombs Of Palermo
I Capuchin catacombs Palermo ungathumela ukuphahlaza phansi izinzwa zakho. Ukuze amadlingozi abafuna ukuthi wajabulela ukwesaba nangokuthuthumela, catacombs ziyindawo kakhulu ukuvakashelwa. Lezi catacombs zimbozwe ngu yokugula kwabantu kanye imfihlakalo kulowo muntu kwansuku. Okudingekayo eyodwa Ukuvakashela uzithola posing imibuzo enkulu ekuphileni.
Ngalama Capuchin catacombs kuyinto ngempela elithakazelisayo. It is final indawo yokuphumula izinsalela izinkulungwane zabantu abavela kuzo zonke izizinda zokuphila. Iningi catacombs kukhona izindela abacebile bangaleso sikhathi. Nokho, kukhona abantu abambalwa ezivamile lapho kanye. I catacomb elula ngaphansi Isigodlo kanye isonto eduze. Ukuhamba phakathi ngamaphasiji catacombs, uzobona cishe 8000 emizimbeni mummified. Ezinye zazo yilezi ngempela ubudala, ngisho eyaqala 1600s. Izidumbu kuthiwa bamgqumisa futhi kwalondolozwa kahle. Ekuphetheni, njengoba ethusayo njengoba catacombs kubonakale, bayindlu yizivakashi futhi kuwufanele ukuvakashelwa kulabo ukuthi kungathatha it.
Marsala ukuze Palermo Izitimela
Bagheria ukuze Palermo Izitimela
Trapani ukuze Palermo Izitimela
I Chateau de Brissac kuyinto eningizimu Angers, idolobha e Loire River Valley. Kuyinto enqabeni kunazo zonke e-yonke France. Lokhu castle amahle French lavuselelwa ngekhulu le-15 futhi uye bamelana novivinyo kwesikhathi. Ngaphambi ukulungiswa kwaso UMbusi Brissac, kwaba inqaba ephakathi ukuthi emuva eyabhalwa kuya ngekhulu le-11. Nokho, iNkosana kabusha kube grand Renaissance isitayela castle.
Chateau de Brissac ngaphezudlwana kungaba sengathi Chateau abavamile ekuqaleni. Nokho, ngemuva olungaphambili lwesonto kwansuku, kukhona legend angaqondakaliyo ngemoto eziningi ukuvakashela ke. Ziningi ghost izindaba ezihlobene namadlelo futhi Chateau uqobo. Ethandwa kakhulu iyona legend of the Green Lady. Ngokwe-legend yena wabulawa esikhathini esithile castle phakathi nekhulu le-15. Green Lady, noma njengoba selibe ethandwa, Green Lady, kuthiwa zululeka castle namanje. Abaningi ithi baye wabona owesifazane ogqoke eliluhlaza ingubo ukuhamba ngokusebenzisa ngezizathu noma umile phezu kwemibhoshongo. Izakhamuzi zamanje bathi baye asebelijwayele kuye, kodwa izivakashi eziningi ziye uyesaba. Ngaphandle ababembona, abaningi bathi ukuthi ungezwa wakhe moans kulo lonke castle e ekuseni ekuseni.
Rouen ukuze Paris Izitimela
5. Izindawo Iningi Engaqondakali Ukuze Vakashela EBelgium – Dinant
Dinant kungenye edolobheni elincane ukuthi usenza umuzwa imfihlakalo izivakashi. Lihlanzekile leli dolobha futhi esifundazweni Namur waseBelgium. Kuyinto enhle ukuba kubani uma uhlela yokubaleka ngempelasonto kusukela enkulu ekuphileni idolobha. Inhlanganisela edolobheni ukuphila kanye ezungezile landscape yemvelo is obumangalisayo. Izintaba ngemuva komuzi kuhlangene emfuleni Meuse egeleza phakathi kwedolobha zanele unike amandla noma ubani khahlela emuva sokuphumula. Kuye athumba izinhliziyo izivakashi eziningi futhi bakwenza uzizwe wena kwelinye izwe.
Brussels ukuze Dinant Izitimela
E-Antwerp liye Dinant Izitimela
YaseGhent ukuze Dinant Izitimela
Liege ukuze Dinant Izitimela
Usukulungele ukubona izindawo eziningi engaqondakali ukuthi Europe izipesheli? Qala nge kulezi zindawo oluyimfihlakalo kunalo lonke ezinhlanu futhi ukubona umgwaqo kukuthatha. Qinisekisa ukuthi ukuhlela iholide lakho kahle futhi Incwadi zemininingwane Amathikithi ngesikhathi nge Gcina Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Izindawo Iningi Engaqondakali eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-mysterious-places-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#engaqondakali #mysteriousplaces europetrains europetravel i-eurotrip trainjourney